အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် အခန်း
အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...
ABOUT YOUR DREAMS...N..ABOUT MY DREAMS..
ကျွန်တော် ဘာနှင့်တိုက်ဆိုင်လို့ တိုက်ဆိုင်မှန်းမသိ…။ ငယ်စဉ် ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက အဖြစ်အ ပျက်လေး တစ်ခုကို သတိရမိပါသည်။ ထိုင်ခုံ နေရာတစ်ခုအတွက် ပြသနာတတ်ခဲ့ကြတုန်းက ဖြစ်ပါတယ်…။
"မင်းနေရာ မဟုတ်ဖူးဆိုလဲ သူ့ပိုင်ရှင်ထိုင်ပါစေကွာ…။ "
"ဟ..ဘာလို့ ဖယ်ပေးရမှာလည်း ငါ့အတန်းထဲမှာ ရှိတဲ့နေရာ ငါကြိုက်တဲ့နေရာ ထိုင်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲ…။"
"ဒါတော့ ဟုတ်ပါတယ်ကွာ…။ ဒီနေရာက မင်းသာ တကယ်ကြိုးစားချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ တကယ် ကို သင့်တော် ကောင်းမွန်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ…။ အခု မင်းက ကိုယ်တိုင်ကျတော့လည်း နေရာ ကောင်းမှာထိုင်ပြီး ဘာမှမလုပ်…။ သူများ ကြိုးစားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျတော့လည်း ဖယ်မပေးချင်နဲ့…။ မင်းကြောင့် တကယ် ကြိုးစားချင်တဲ့သူတွေ…။ တကယ် အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေ နစ်နာတယ်ကွာ။ ပြီးတော့မင်းကဒီမှာနေပြီး သူများတွေ ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ အချိန်လည်း ဟိုလူ့လိုက်စ ဒီလူ့လိုက်စနဲ့ ဒုက္ခလိုက်ပေးပြီး..ဘာသာရေးလည်း ရိုသေကိုင်းရှိုင်းရကောင်းမှန်းမသိ…။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို လည်း..မလေးမစားနဲ့ လုပ်ပြီး ပညာသင်ကြားရေး ကိုလည်း ဒုက္ခပေးသေးတယ်...။"
"ဟေ့ကောင်…ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ? ဘာလဲ..မင်းက အတန်းခေါင်းဆောင်ပါ ဆိုပြီးငါ့ကို ပါဝါ လာပြနေ တာလား…။ ဒါမှမဟုတ် ငါ့ကိုစိန်လာခေါ်နေတာလား..? မင်းက ဘာကောင်မို့လို့လဲ..? မလောက်လေးမ လောက်စားနဲ့…။ မင်းကများ ငါလိုကောင်ကို လာပြီးတော့ ဆရာလာလုပ်နေသေးတယ်…။ နာချင်ပြီထင်တယ်။ ဟုတ်လား ဟေ့ရောင်…? မင်းတော့ ကျောင်းအပြန် အရိုက်ခံချင်ပြီထင်တယ်…။ မင်းငါ့အကြောင်းသိပါတယ်..။ ဒီအခန်းထဲမှာ ငါ့ကိုဘယ်ကောင်မှ မယှဉ်နိုင်ဘူး။ မော်မကြည့်ရဲဖူး ဆိုတာ...။"
"ငါအတန်းခေါင်းဆောင်မို့လို့ မင်းကို ပါဝါလာပြတာလဲ မဟုတ်ဘူး..။ ငါကျောင်းကအပြန် မင်းတို့ သတ္တိမရှိလို့ မိန်းမလို မိန်းမရ ၀ါးရင်းတုတ်အားကိုးနဲ့ ချောင်းရိုက်မှာလည်း မကြောက်ဖူး…။ ခိုးချောင် ခိုးဝှက် နောက်ကျော ကနေ ဓားနဲ့ဝင်ထိုးမှာလည်း မကြောက်ဖူး…။ အေး… နောက်တစ်ခုက မင်းကို ဘယ်သူမှ မယှဉ်နိုင်လို့ မင်းကို ကြောက်လို့ အခန်းထဲက သူတွေကလည်း ငြိမ်နေကြတာမဟုတ်ဖူး..။ မင်းနဲ့ ယှဉ်ပြီးမိုက်ရမှာကို မလိုလားလို့ မတန်လို့ လျစ်လျူရှုထားတာ နားလည်လား…? ဒီအတိုင်းလည်း ငြိမ်နေကြတယ်မထင်နဲ့ မင်းကို ပညာသား ပါပါနဲ့ နောင်ကြဉ်သွားလောက်တဲ့ သင်ခန်းစာပေးမလို့ အချိန်ကောင်းကို သီးခံပြီးစောင့်နေတာ…။ အဲဒါမင်း သဘောပေါက်ထား…။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟုတ်လှပြီထင်မနေနဲ့…။"
ပြောရင်း ပြောရင်းဖြင့်သူနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စကားတွေဟာ တော်တော်လေး အခြေအနေ တင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။
"ဟေ့ကောင်…မင်းက ငါ့ကို ဒီနေရာမှာ ထိုင်ချင်လို့ ထိုင်နေတယ်များ ထင်လို့လား…။ ငါဒီမှာ ထိုင်တယ်ဆိုတာ က ငါ့အတန်းကို ငါကာကွယ်ထားတာကွ…။ အဲဒါမင်းနားလည်လား…? တစ်ခြားအခန်းက ကောင်တွေ ငါဒီမှာ ထိုင်တာကို တွေ့တာနဲ့ ငါ့အခန်းသားတွေကို မိုက်ကြေးမခွဲရဲအောင်.. ပြသနာမရှာရဲအောင် ကိုယ့်အသိစိတ် ဓာတ်နဲ့ကိုယ် သမိုင်းပေးတာဝန်အရ ထိုင်ပေးထားတာကွ…။ ဟား..ဟား..ဟား…။ နောက်ပြီးငါ့မှာက တစ်ခြားအခန်းက အားကိုးရလောက်တဲ့ ကောင်တွေကလည်း ငါ့ဘက်က ရပ်တည်နေတယ်လေ…။ ငါတို့အခန်း ကိုထိရင် သူတို့ကလည်း ငါတို့အခန်းဘက်ကနေ ကာကွယ်ပေးမယ့်လို့ ငါ့ကိုပြောထားပြီးသားကွ။ ငါတို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့..။ မဟုတ်ဖူးလား...ဟား..ဟား"
"ဟေ့ကောင်…။ အရူး..။ မင်းထင်ရာ မြင်ရာ သမိုင်းပေးတာဝန်တွေဘာတွေနဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အဓိပ္ပါယ်မရှိ တဲ့ ပေါက်ကရတွေ လျှောက်ပြောမနေနဲ့…။ ငါတို့အခန်းကလည်း ဘယ်သူကမှ…။ အေး…မင်းကလွဲလို့ပေါ့ကွာ ဘယ်သူကိုမှ ပြသနာသွားမရှာဘူး…။ ငါတို့အခန်းထဲက သူတွေက သူများကို ဘယ်တုန်းကမှ ပြသနာသွားရှာ တာ၊ ရန်သွားစတာ မရှိတဲ့အတွက် ဘယ်သူကမှလည်း ငါတို့အခန်းကို အလကားနေ ပြသနာလာမရှာဘူး…။ အေး…..မင်းအခုလို အတန်းရှေ့မှာ ထိုင်နေတော့မှ သူများအခန်းတွေက ငါ့တို့အခန်းကို အထင်သေး၊ အမြင် ကတ်ပြီး ပြသနာလာရှာချင်ရှာမှာ…။ နောက်တစ်ခု ငါပြောချင်တာက မင်းပြောတဲ့ တစ်ခြားအခန်းက ကောင်တွေ ဆိုတာလည်း မင်းကိုကပ်ပေါင်း၊ Cover လုပ်ပြီး ငါတို့အခန်းထဲက တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ထိကပါး ရိကပါးလုပ်ပြီးတော့ သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက် အမြတ်ထုတ်ဖို့ လုပ်နေတာ။ အဲဒါရော မင်းသိရဲ့လား? အကယ်၍ သူများတွေက ငါတို့ အခန်းကို အလကားနေ ပြသနာလာရှာ… လာစော်ကားတယ်ပဲ ထားအုံး…။ ဟေ့ရောင်…ဒီမှာ..။ ငါတို့အခန်းက အမြဲစည်းလုံးပြီးသားကွ..။ အဲဒါမင်းနားလည်လား…? ကိုယ့်အခန်း ထဲကသူကို သူများကလာစော်ကားရင် ခေါင်းငုံခံနေမယ့်အထဲမှာ ငါတို့ အခန်းနဲ့ အခန်းထဲကသူတွေ မပါဘူး။ နောက်ပြီး မင်းသိအောင်ထပ်ပြောအုံးမယ်..။ ငါတို့အခန်းက ဘယ်အခန်းက ကောင်တွေကိုမှလည်း အားမကိုးဘူး…။ ကိုယ့်အခန်းတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားကိုပဲ အားကိုးတယ်…။ အေး...နောက်ဆုံးတစ်ခုက သူများတွေလာစော်ကားမှ မဟုတ်ဘူး…။ ကိုယ့်အတန်းသူ အတန်းသား အချင်းချင်းထဲမှာ အသားထဲက လောက်ထွက်နေတဲ့ ကောင်မျိုးရှိနေရင်လည်း ခြေမ မကောင်း ခြေမ… လက်မ မကောင်းလက်မ ဘယ်တော့မှ လက်ပိုက်ကြည့်ပြီး…ဒီအတိုင်း လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ခွင့်ပေးထားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ…။
ထိုကဲ့သို့ သူနဲ့ ကျွန်တော် အခြေအတင် စကားများနေကြချိန်မှာ ဘယ်အချိန်က ဘယ်လို ကျွန်တော့် နောက်ကို ရောက်နေကြမှန်းမသိသော အတန်းထဲမှ ကျောင်းသားများ အားလုံးနီးပါး တော်တော်လေး များနေပြီဆိုတာကို ကျွန်တော် သတိထားမိလိုက်ပါတယ်…။ ဟုတ်လောက်ပါတယ်လေ…။ ဒီကောင် အတန်းကို ဗိုလ်ကျခြင်တိုင်းဗိုလ်ကျ…။ ဒုက္ခပေးချင်တိုင်းပေးနေတာ တော်တော်လေးကို ကြာနေခဲ့ပါပြီ..။ သူ့ကြောင့် အတန်းသူ အတန်းသားတွေရော..အတန်းရော..။ နောက်ဆုံး အတန်းပိုင်ဆရာမပါမကျန်..။ သူများအတန်း တွေရှေ့မှာ မျက်နှာပျက်ရပေါင်း၊ အရှက်ကွဲရပေါင်းတော် တော်များနေခဲ့ပါပြီ..။ အားလုံးရဲ့ မျက်လုံးတွေက လည်း အဲဒီ့သကောင့်သားကို ကောင်းကောင်း ပညာပေးပို့ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဒေါသတွေကို ကောင်း ကောင်းကြီးကို ဘာသာပြန် နေကြပါပြီ…။ ဒါကို ဟိုကောင်လည်း သတိထားမိသွားဟန်တူပါတယ်…။ တော်တော်လေးကို ထိတ်လန့်နေတာကို မနဲ ဟန်ကိုဖော့လုပ်နေပေမယ့်…တော်တော်လေးကို ရုပ်ပျက် နေပါပြီ…။ ဒီလောက်ဆို အကယ်၍သူသာ ဒီတစ်ခါ ထက်ငြင်းလိုက်ပါက ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရှေ့ရေးကို သူကောင်းကောင်း သဘောပေါက်နေပြီဆိုတာ သေချာနေပါပြီ…။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအချိန်မှာ မေးဖို့ အကောင်းဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးပွဲသိမ်း မေးခွန်းတစ်ခုကို အတန်းသားတွေဘက် လှည့်ကြည့်နေရာမှ သူ့ဘက်သို့ ခပ်ဖြေးဖြေးပဲ လှည့်ကာ ပြုံးပြီးသူ့ကို မေးလိုက်ပါတော့တယ်။
"ကဲ…ဘယ်လိုလဲ…? မင်းဒီနေရာက ဖယ်ပေးမယ်မလား…?"
p.s- အမှန်က အဲ့ဒီ့နေရာမှာ ဘယ်သူထိုင်တယ် မထိုင်ဖူးဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ ဘယ်သူပဲ ထိုင်ထိုင် တကယ်အရေးကြီးတာက ကျွန်တော်တို့ အတန်းကြီး ဂုဏ်ရှိဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့၊ တိုးတက် ကောင်းစားဖို့ပါ...။ အကယ်၍ သူသာ အဲဒီ့နေရာ မှာ ဆက်နေပြီး အခန်းအတွက် တကယ်ကြိုးစားပေးမည် ဆိုပါကလည်း ကျွန်တော်တို့ အတန်းသူ၊ အတန်း သားတွေ အားလုံးဟာ သူအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ မိုက်ပြစ်တွေကို ခွင့်လွှတ်ပြီး ၀မ်း ပန်းတသာ ကြိုဆိုနေမိမှာ သေချာပါတယ်...။
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:01 PM
love ur post, my dear ..!! i think i know what u r talking about and who u mean...neway, nice one !!
April 23, 2008 at 7:50 PM
THIS POST IS SIMPLE BUT VERY MEANINGFUL....
LOVED IT CHIT!
PROUD OF YOU :)
April 23, 2008 at 8:17 PM
April 23, 2008 at 10:07 PM
ဘယ်သူနဲ့စကားများနေတာလည်းလို့လန့် လိုက်တာ ဇတ်သိမ်းကြမှပဲ သေချာသိရတော့မယ်ထင်တယ်း)
April 23, 2008 at 10:10 PM
တကယ်တန်းကျ... စိတ်ဓါတ်ပဲဗျ... စိတ်ဓါတ်ရေးရာနဲ့တိုက်ရင် မိုက်ကန်းသူတွေ ကြောက်တယ်... it great....!!!!!!!
April 23, 2008 at 10:20 PM
WOW.... You get to the final point. Spread it out :P
April 23, 2008 at 10:25 PM
လူ.ဘ၀ရဲ. တိုက်ပွဲတခုပဲ ။
တကယ် တန်း ချစ်တယ်လို.မဆိုပါနဲ.အုန်း ..... ကိုယ်ဒီအခန်း မှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ. စိတ်ဓာတ်လေး နဲ.တင် ကိုယ်. သိက္ခာ ကိုယ်. တာဝန် ကိုယ်ယူလိုက်ရင် အဆင်ပြေပြီ ထင်တယ် ။ လူတိုင်းအတွက် အတန်းခေါင်းဆောင် မလို သလို လူမိုက်လည်း မလိုဘူး ။
ဘာလို.လည်းဆိုတော. ကိုယ်ချင်းစာတက်တဲ. စိတ်လေး တခု ပဲလိုတယ် ။ လူမှန်ရင်တော. ကိုယ်ချင်းစာ တက်တဲ. စိတ်လေး ရှိကိုရှိရမယ် ။ ဒါမှ မပာုတ်ရင်တော. အဲ.ဒါ ကို နံမယ်ပေးဖို. တခုပဲရှိတော. တယ် အဲဒါ အရိုင်းအစိုင်း (သို.) တိရစ္ဆာန် ပဲ ။
ကျနော. အတွေးတွေ မှားကောင်းမှားပါမယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... သိပ်ကောင်းတဲ. ပိုစ်. တခုပါ ။ ညီ မင်းကို ကြိုဆိုတယ်ကွာ ။ ထာဝရ ညီအကို အနေနဲ. ပြီးတော. လေးစားပါတယ် ။
း) မင်းသိပါတယ် ။ ဒို.တွေ က လမ်းတလမ်းထဲ မှာ အတူတူ လျှောက်နေကျတဲ. ကျောင်းသားလေးတွေပါ ။
အဲဒီလူကတော့ အဲဒီနေရာကိုဖယ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ သူသေကာနီးတောင်သူလူတွေ အဲဒီနေရာကိုထိုင်ခိုင်းခဲ့မယ့်သဘောရှိတယ်ဗျ။ သူလူဆိုတာကလည်း သူလိုပဲလူမိုက်တွေဆိုတော့။ အင်းးးး
April 23, 2008 at 11:35 PM
ကျုပ်ကတော့ အရေးအသားကိုလေးစားတယ်။ အတွန်းအတိုက်လေးတွေ လှတယ်ဗျာ။
April 23, 2008 at 11:40 PM
အဓိပ္ပာယ်တော်တော်ရှိတာပဲ။ အခန်းကို ဥပမာပြပြီးရေးထားတာလည်းကောင်းတယ်။
PS မှာရေးထားတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ အဲဒီအယူအဆကိုထောက်ခံတယ် အစ်ကိုရေ။
April 23, 2008 at 11:48 PM
cmmt မရေးဘဲ နေမလို့ပါဘဲ ။ post ကကောင်းနေတာရော ...တင်ပြပုံလှပတာရော နှစ်သက်ပါကြောင်း စာရေးချန်ထားခဲ့ပါတယ် ။
April 24, 2008 at 12:20 AM
Really nice work..Amazing! you can really point out what you mean with good example..I really impressed your writing and idea..Carry on your idea into reality...Better share to your colleagues too..:)
April 24, 2008 at 1:25 AM
Black! ရေ ....မင်းကောက်ချက်ကို ငါလည်းသဘောတူတယ်ဟေ့။ အတန်းကို ချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့ အမုန်းခံ အနစ်နာခံ ပြောတဲ့ သူကို ဦးညွတ်ပါတယ်။
April 24, 2008 at 1:37 AM
kinda similar with U THAN SHWE!! LOL .. since no one wants to say it, I will do it!! HAHA
April 24, 2008 at 2:30 AM
စိုးထက် - Soe Htet ! said...
:) ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ ဗျို့ :D
April 24, 2008 at 3:14 AM
BLANK PAPER said...
April 24, 2008 at 3:30 AM
Min Min said...
ရဲဘော် ဆက်လုပ်..အားပေးနေ၏ .. ကျွန်တော့ ကွန်ယက်ကြီး လက်ရာတွေမြောက်တယ်ဆိုလို့ . ဘာများထူးလို့လည်း .. ဒီအတိုင်းက ဒီအတိုင်းပါပဲဗျာ
April 24, 2008 at 3:46 AM
စိတ်ထဲရှိတာ ပြောရရင်တော့ နေရာမှာလည်း မထိုင်ချင်ဘူး
အခန်းထဲလည်း မ၀င်ချင်ဘူး ...
နောက်ဆုံးကျောင်းကို မတက်ချင်တော့တာ ... :P
April 24, 2008 at 3:49 AM
သယ်ရင်း ကောင်းတယ်ကွ.. ဟုတ်တယ် နေရာက အရေးမကြီးပါဘူး
လုပ်ဆောင်မှု့ပါပဲ ... အရင် က ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိမှာ အကောင်း
ဆုံး လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင် ကြိုဆိုရမှာပေါ့ ... သယ်ရင်းရေ ..
တစ်ခါတည်းမေမေ့ မွေးနေ့ကိုပါ ဆိုတောင်းသွားတယ်ကွာ အင်တာနက်
အခက်အခဲကြောင့် ..နားလည်ပါကွာ ... ပျောရွှင်ပါစေကွာ. ..း)
သယ်ရင်းအမေလည်း ကို့အမေပဲပေါ့ကွာ နော...
မေမေတစ်ယောက် မွေးနေ့မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ အထိ
မိသားစုနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်စွာ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျာ ...
April 24, 2008 at 3:53 AM
April 24, 2008 at 3:54 AM
April 24, 2008 at 4:03 AM
ကျောင်းသားတစ်ချို့ ... အကြောင်းလေး ထည့်ပေးပါလား ... အဲဒီ ကျောင်းသားရှိလို့ ဆိုပြီး အခြား အတန်းမှာ စာရင်းသွင်းပြီး စာမသင်ပဲ အရက် ခိုးသောက်၊ ဆေးလိပ် ခိုးသောက် နေပြီး ပြန်လာ ချင်ပါတယ် ပြောနေတဲ့ ကျောင်းသား မျိုးလေး တွေ ပေါ့ ... စုံအောင် ပြောတာပါ တစ်ခြား ရည်ရွယ်ချက် မပါပါဘူး .. တစ်ဖက်သတ် မဆန် အောင်ပေါ့ ... :P
April 24, 2008 at 4:17 AM
very good post. yes, doesn't matter who sit in that chair but care for your own people. also each class member has responsibility to protect their class.
April 24, 2008 at 4:18 AM
လာတာနဲနဲနောက်ကျတာနဲ့ comments တွေတောင်တော်တော်များနေပြီ.. ငါ့အမြင်ကတော့ နေရာထိုင်တာ မထိုင်တာထက် လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းရင် ဆက်ထိုင်ချင်ထိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာ အဲဒိလူဘယ်လောက်ရမ်းကားခဲ့လဲပေါ်မူတည်တယ်.. အမှားနဲနဲပဲ လုပ်ခဲ့တဲ့သူက အမှန်ပြန်ပြင်ဖို့ အခွင့်ရေးပေးသင့်တယ်ဆိုပေမဲ့.. ကိုယ်ကျိုးအတွက် လူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်နဲ့ အနာဂတ်တွေကို ပက်ပက်စက်စက်ထိခိုက်လောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူအတွက် အခွင့်အရေးမရှိသင့်တော့ဘူး.. ဘာလို့လဲဆိုတော့.. သူတို့ကောင်းချင်ရင် အစထဲက (or) လက်ရှိကောင်းဖို့ သူတို့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတာပဲ.. အရင်ကမိုက်မိလို့ ဒီတစ်ခါကြိုးစားပါ့မယ်ဆိုတာက excuse ဖြစ်သွားပြီ.. အမှားသေးသေးကို cover up ဖြစ်ဖို့ အမှားကြီးကြီးနဲ့ ဖုံးသလို ပြီးတော့မှာကိုမဟုတ်ဘူး.. အတန်းသားတွေ ဒီတစ်ခေါက်မခံတော့ဘူးဆိုတာသိလို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင် နောင်ကောင်းပါ့မယ်ဆိုပြီး ချက်ချင်းအမြင်မှန်ရတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲရှိတယ်.. သူ့အသိစိတ်နဲ့ အမြင်မှန်ရမှဖြစ်မှာ.. ဒါပေမဲ့ အဲဒိခုန်မှာ ထိုင်နေတဲ့ကောင်ကြီးက အမြင်မှန်သူတစ်ယောက်ထဲရနေရင်တောင် သူဖျက်စီးထားတဲ့ သူ့ကပ်စားနေတဲ့ သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြောင့် သူအမှန်ပြင်ချင်မှပြင်မှာ.. ပြောချင်တာကတော့ စာသင်ခန်းထဲလောက်မိုက်တဲ့ကောင်ကို သူကောင်းရင် အခွင့်ရေးပေးသင့်တယ်ဆိုပေမဲ့ နိုင်ငံနဲ့ချီပြီး generation လိုက် မိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုတော့ အခွင့်ရေးမပေးသင့်တော့ဘူး.. bocz they will never surrender their ego....
April 24, 2008 at 7:00 AM
ငါ့အထင်တော့ အဲဒိ လူမိုက်တကယ် လူကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူနဲ့သင့်တော်တဲ့နေရာ သူ့ဟာသူပြောင်းထိုင်လိမ့်မယ်.. အတန်းရဲ့ကောင်းကြိုး တကယ်လုပ်မဲ့သူကို အသာတကြည်ပေးလိမ့်မယ်.. ဒီမှာပဲဆက်ထိုင်ပရစေ ကျတော်နောင်တရပါပြီဆိုတာကြီးက ဆက်ထိုင်ချင်လို့ညာပြောတာဖြစ်သွားပြီ.. ငါခုလိုပြောတာကို သဘောထားသေးတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူးထင်တယ်.. တချို့အမှားတွေက ပြန်ပြင်လို့မရဘူး.. comments ကရှည်သွားပြီး postဖြစ်တော့မယ်.. sordi ဆရာလုပ်တာဟုတ်ဖူးနော်..
April 24, 2008 at 7:51 AM
ရေးနှင့်ပြီးသားလူတွေ စုံနေတော့ အထွေအထူး မရေးတော့ ပါဘူး။
April 24, 2008 at 12:59 PM
မွန်တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အတန်းလေးကို ကိုယ်ချစ်တယ်
April 24, 2008 at 7:17 PM
ပို့စ်အကြောင်းမရေးမီ အနက်ရောင်အိပ်မက် ဆိုတဲ့ နာမည်လေးကို ကျနော်က မဟူရာအိပ်မက် လို့ ကဗျာဆန်ဆန်လိုလို ဘာလိုလို နာမည်ပေးကြည့်နေသေးတယ်။ :)
ကျနော် ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ စာရေးသူရဲ့ စိတ်ထဲက ဆန္ဒတွေကို ဆက်စပ်တွေးတော မြင်ယောင်မိပါတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ယူနီဖောင်းကို ၀တ်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ငယ် တယောက်ရဲ့ အတွေးထဲမှာ ဒီလို မျှတဆီလျော်တဲ့ စိတ်တွေ ရှိနေတာကို တကယ်ကိုပဲ အားတက်မိပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ ဘယ်သူထိုင်ရမယ် ဆိုတာထက် ထိုင်နေတဲ့လူရဲ့ အခန်းအပေါ် စေတနာ တကယ်ထားမထားက အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကျနော် လုံးဝလက်ခံပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့လူက အခန်းအတွက် စေတနာတကယ်ထားနေရိုးမှန်ရင် သေချာပါတယ်၊ ဘယ်သူကမှလဲ `မင်းမထိုင်နဲ့ကွာ´ လို့ ဆန့်ကျင်မှာ မဟုတ်သလို စေတနာ တကယ်မရှိတာကို အားလုံးက သိနေကြရင်လဲ `မင်းဖယ်တော့ကွာ´ လို့ တောင်းဆိုမှာဟာလဲ သေချာပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဘယ်သူလာထိုင်နေသည်ဖြစ်စေ အခန်းကို တကယ့်အခန်းကောင်း ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာတရားက အဓိကပါပဲ။
ကွန်မန့် နှစ်ခါကြီးများတောင် လာပေးသွားတဲ့ အကိုစိုးထက်ရဲ့ ဒုတိယမြောက် ကွန်မန့်လေးကိုလဲ ကျနော်က ထပ်ဖြည့်ပြောချင်ပါတယ်။ အကိုစိုးထက်ရေ…၊ အကိုက အရက်သောက်၊ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ ကျောင်းသားကိုတွေကို မြင်တာကို ကျနော်လက်ခံသလို အရက်မသောက်၊ ဆေးလိပ်မသောက်ပေမယ့် အခန်းထဲ ထိုင်မိတဲ့လူကို ဆန့်ကျင်မိလို့ အခန်းပြင် ကန်ထုတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုလဲ မြင်တတ်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီး တဖက်သတ် မဆန်လောက်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
အခုပို့စ်အတွက် လေးစားပါတယ် မဟူရာအိပ်မက် ပိုင်ရှင်ရေ။
April 25, 2008 at 7:46 AM
April 26, 2008 at 7:16 AM
Ka Daung Nyin Thar said...
This is totally great and awesome post my brother!!!
I hope your inner strength and talent will bring you what you want to acheive and for the good of the country.
Lai Lai said...
မိုက်တယ်ကွာ...ရေလည်ထိတယ်။ တော်ပါပေတယ် မောင်လေးရယ်။ :)
May 5, 2008 at 10:43 AM
ဖယ်ပေးမလား ဖယ်မပေးဘူးလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို သူတို့ ရှောင်ထွက်သွားမှာပါပဲ.. ဒီခုံကနေ မပြုတ်ကျအောင် မြဲမြဲဆုပ်ထားတဲ့လက်တွေ သေခါမှလွှတ်မှာပါ..
သတင်းတွေထဲမှာ မပါတဲ့အချက်တစ်ခုက ဘန်ကီးမွန်းမြန်မာပြည်ကိုရောက်စဉ်အခါမှာ ဦးသန့် ဂူမှာ သွားရောက် ဂါဝရပြုတယ်ဆိုတာပါပဲ.. ဦးသန့် အရေးအခင်း ၁၉၇၄ မှာ ဖြစ်ခဲ့တုန်းက ကျောင်းသားတွေ အများကြီးသေခဲ့တယ် ထောင်ထဲရောက်ခဲ့ပါတယ်.. အဲဒီ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဦးနေ၀င်း သူရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ များကိုနှိုင်းယဉ်ကြည့်လိုက်ပါ.. ဘယ်မလဲ သူ့ ရဲ့ အုတ်ဂူ အထိမ်းအမှတ်.. အခုထက်ထိ အမြင်မှန်မရသေးပဲ ဆက်သွားနေတဲ့သူတွေအတွက် ပြောလဲကျွဲပါးစောင်းတီးဖြစ်နေတာပါပဲ
May 25, 2008 at 11:19 AM
sin dan lar said...
September 21, 2008 at 1:20 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့စာသားတွေဗျာ........ပညာသားပါပါနဲ့ ကို ပြောသွားတာ.............တော်တော်လေးကို
က သူ့ဆီကဘာယူထားလို့ ၊ ဘာယူချင်လို့ဆိုတာမသိဘဲ
December 1, 2008 at 11:34 AM
Pyiet Oo Aung
Just An Ordinary Guy Who Loves Web Developing & Arts. Especially Music, Literature & Photography. Yes, Also Addicts To Soccer. Love The Country. Love The Coffee. Love The Cigarettes. Love The Cameras. Love The Guitars & Love My Wife...! http://www.blackdream21.com More >>>
Feeling out of my mind. Please forgive me for can't post anything during these days!!! Thanks for your visit!!!
English Poems (13)
Video Clip (7)
ကျွန်တော့်ရဲ့ Blog အား http://blackdream21.blogspot.com ဖြင့် Link ချိတ်ပေးထားသူများ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ www.blackdream21.com သို့ ပြောင်းလဲ...
သိကြာင်းမင်းသည် နှစ်စဉ်ထမ်းဆောင်နေကြ တာဝန်အား ထမ်းဆောင်ရန်အလို့ငှာ ထုံးစံအတိုင်း လူ့ပြည်သို့ ဆင်းသက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်…။ ယခင်နှစ်များနဲ့ မတ...
မကြာပါဘူး ကြွေလွင့်သွားတယ်…အိပ်မက်တွေ…. တစ်စစီ….။ အဲဒီ့ညပေါ့ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေ အိပ်တန်း တက်…။ မျှော်လင့်ချက် လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဟိုဘက်ကမ်းကို ...
၀တ်ရုံတစ်ခုကို ၀တ်လိုက်တယ်…အဲဒီ့မှာ ဘ၀တွေ စပြီး ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်….! ဘယ်လို ၀တ်ရုံမျိုးလဲ ငါဝတ်ဆင်လိုက်တာလဲ…?? သေသေချာချာတော့ မသိပေမယ့် အ...
ငါတစ်ယောက်ထဲ ဒီအခန်းကျဉ်းထဲမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာနေရအုံးမှာလဲ…။ ဘယ်နေရာကို ကြည့်ကြည့် ထွက်ပေါက်မဲ့နေတဲ့ ငါ့အခန်းထဲမှာ အလင်းတစ်စက်လောက်ကိုတော့ င...
အခန်း(၁) HAPPY ENDING! ဤဇာတ်လမ်း၏ နောက်ပိုင်းတွင် သေဆုံးသွားခြင်း လမ်းခွဲသွားခြင်း နှုတ်ဆက်သွားခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) ပါဝင်ခြင်းမရှိ။ ...
ကျွန်တော့်အစ်ကိုကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုလင်းထက် နဲ့ ကို ဟန်သစ်ငြိမ်တို့က အမှတ်တရ Tag ထားတာပါ...။ *********************************************...
ကျွန်တော်နှင့် ပျောက်ဆုံးသွားသော "ဦးခေါင်း" များ....
ထူးဆန်းတယ်ဗျာ…။ ညက ကျွန်တော်အိပ်မက် တစ်ခုမယ်တယ်….။ အိပ်မက်ထဲမှာတော့…..။ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ကျွန်တော...
ကျွန်တော်...သူမ နှင့် တံခါးတစ်ချပ်
နိဒါန်း ကျွန်တော်ထိုင်နေပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ၀ိဥာဉ်တွေ လွင့်မြောနေတယ်…..။ အခန်း (၁) ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရတဲ့ တံခါးခေါက်သံနှင့်အတူ ...
ကျွန်တော် ။ ။ ကိုယ့်ကို “ အိပ်မက် ” တစ်ပွဲပေးကွာ ညီလေး… “ မျှော်လင့်ချ က်” များများထည့်… “ အတိတ်ဆိုး ” တွေမထည့်နဲ့… “ အနာဂတ် ” ရွှဲရွှဲေ...
How Do You Feel My Blog :) ?
ကျွန်တော်နှင့် ထူးဆန်းသော ကစားပွဲ
ကျွန်တော် သူမနှင့် တံခါး တစ်ချပ်
ကျွန်တော်နှင့် အဖြူရောင် နတ်သမီး
ကျွန်တော်နှင့် ပျောက်ဆုံးသွား သောဦးခေါင်းများ
- Ebook များ Download မရလျှင်ပြောပါ။ Email မှတစ်ဆင့် ပို့ပေးပါမည်။
- စာမေးပွဲ အခြေအနေတစ်ခုအရ ကျွန်တော်ပို့စ်တင်တာကျဲပါမည်။
- ကျွန်တော် Blog Link တွေ Update လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ကျန်ရှိနေ သေးပါက ပြောခဲ့နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Happy Birthday ပါ မေမေ...!!!
Zaw-Gyi Font ရယူရန်
» ဇော်ဂျီ Font Installer
» Alpha Win Unicode
လေ့လာသင့်သော Blogger များ
သွားလည်နေကျ Blogger များ
» July Dream
» Gu Gu
» Green Girl
» Spreading Soul
» Pink Gold
» ပေါက်ကရ ၈၀
» မောင်မျိုး (ရင်တွင်းဖြစ်)
» Blue Phoenix
» December Cinderella
» နယ်စည်းမခြား မြန်မာ ဘလော့ဂါများ
Online Movie, Video Site များ
» Korean Movies
» Asian Movies
» Flick Peek
» ခရမ်းပြာ အိပ်မက်
» Daily Motion
» Badjojo (+18 Only)
Forum & Useful Links
» Xsharx Forum
» Daily-Warez Forum
» Native Myanmar
» Seventh Technology
» မြန်မာ Blogger Forum
» Myanmar Cupid
» Movie Rush
» The Best Wallpaper
» St. Augustine
» MMfamily Forum
» Mobile Themes Forum
» Sony Ericsson Softwares
» အချစ်ရွာ (+18 only)
Crack And Serials
» Crack Me
» Crack Found
» Crack Spider
» eMP3 World
» မြန်မာ Mp3